Mazi Ngegama UThixo—Ufuna Ulazi Igama Lakhe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGreenland IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNdebele IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Ngaba Unokumazi Ngegama UThixo?
Liwonga elikhulu ukuvunyelwa ngumntu obalulekileyo ukuba umbize ngegama lakhe xa umbulisa. Izihandiba zidla ngokubizwa ngamagama afana nelithi “Mongameli,” “Mntwan’ Omhle,” okanye kuthiwe “Mhlekazi Obekekileyo.” Ngoko ke, ubuya kuziva uwongiwe ukuba umntu okwisikhundla esiphezulu ebenokuthi “Ungandibiza nje ngegama lam.”
KWILIZWI lakhe iBhayibhile, uThixo oyinyaniso uthi: “NdinguYehova. Lilo elo igama lam.” (Isaya 42:8) Uye wabaphatha ngesidima abakhonzi bakhe ngokubavumela ukuba bambize ngegama nangona enezibizo ezininzi ezifana nesithi “uMdali,” “uSomandla,” nesithi “Nkosi enguMongami.”
Ngokomzekelo, umprofeti uMoses wakhe wabongoza uThixo esithi: “Ndiyangxengxeza, Yehova.” (Eksodus 4:10) Xa kwakunikezelwa itempile yaseYerusalem, uKumkani uSolomon wawuqala kanje umthandazo wakhe: “Owu Yehova.” (1 Kumkani 8:22, 23) Xa umprofeti uIsaya wayethetha noThixo egameni lamaSirayeli, wathi: “Wena, Yehova, unguBawo.” (Isaya 63:16) Kuyacaca ukuba uBawo wethu wasezulwini ufuna simbize ngegama.
Ngoxa ukubiza uYehova ngegama lakhe kubalulekile, ukumazi ngegama kuthetha okungakumbi. Kwabo bamthandayo nabamthembayo uYehova uthembisa oku: “Ndiya kumkhusela ngenxa yokuba elazi igama lam.” (INdumiso 91:14) Kucacile ukuba ukwazi igama likaThixo kuthetha lukhulu, kuba kubalulekile ukuze ukhuselwe nguye. Yintoni ke ngoko efunekayo ukuze umazi ngegama uYehova?
IMBONISELO Julayi 2010